Inside Out (2015) | MM Movie Store
ဒီနတေ့ော့ ပရိတျသတျတှအေကွိုကျတှစေ့မေယျ့ Animation ဇာတျကားလေးတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ..နိုငျငံတကာမှာလညျးအောငျမွငျမှုမြားစှာရခဲ့သလို..ရုပျရှငျဝဖေနျရေး..တှကေလညျးခြီးကြူးထားတဲ့ Animation ဇာတျလမျးကောငျးလေးဖွဈပါတယျ..
Animation တကားအနနေဲ့လညျးထူးထူးခွားခွား IMDb Rating မှာ 8.5 အထိ တောငျရောကျရှိထားတာမို့ ကောငျးလားမကောငျးလားဆိုတာလုံးဝစဉျးစားနစေရာလိုမှာလညျးမဟုတျတဲ့အပွငျ..ကွညျ့သငျ့တဲ့ Animation ဖွဈကွောငျးအသိပေးခငျြပါတယျအညှနျးလေးအရငျခံစားကွညျ့ရအောငျအညှနျးကနညျးနညျးတော့ရှညျပါတယျ..
သသေခြောခြာခံစားခငျြရငျတော့စာကိုအဆုံးထိဖတျဖို့အကွံပေးလိုကျပါတယျ.ဒီကားက Pixar ရဲ့ ကာတှနျးကားကောငျးတဈကားဖွဈပွီး၊ ကလေးလူကွီးမရှေး ကွညျ့နိုငျတဲ့ဇာတျကား ကောငျးတဈကားပါ။ The Incredibles ဇာတျကား Review တုနျးက Pixar ရဲ့ အကွောငျး ပရိတျသတျကွီးကို ပွောပွခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဒီကုမ်ပဏီကရိုကျတဲ့ ကာတှနျးတိုငျးက ဇာတျလမျးကောငျးပွီး အနုပညာရသမွောကျ တယျလို့ အားလုံးသိထားကွပါတယျ။ ဒီကားကလညျး ဒီအတိုငျးပဲ အနုပညာရသမွောကျအောငျ ရိုကျကူးထားနိုငျသလို၊ တကယျ့ ဝမျးနညျးကွညျနူး စရာ ကောငျးပွီး၊ ခံစားခကျြရသစုံပေးနိုငျအောငျ ရိုကျကူးထား နိုငျတာတှရေ့ပါတယျ။
ဒီနေ့တော့ ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် Animation ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..နိုင်ငံတကာမှာလည်းအောင်မြင်မှုများစွာရခဲ့သလို..ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေး..တွေကလည်းချီးကျူးထားတဲ့ Animation ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်..
Animation တကားအနေနဲ့လည်းထူးထူးခြားခြား IMDb Rating မှာ 8.5 အထိ တောင်ရောက်ရှိထားတာမို့ ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာလုံးဝစဉ်းစားနေစရာလိုမှာလည်းမဟုတ်တဲ့အပြင်..ကြည့်သင့်တဲ့ Animation ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးချင်ပါတယ်အညွှန်းလေးအရင်ခံစားကြည့်ရအောင်အညွှန်းကနည်းနည်းတော့ရှည်ပါတယ်..
သေသေချာချာခံစားချင်ရင်တော့စာကိုအဆုံးထိဖတ်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်.ဒီကားက Pixar ရဲ့ ကာတွန်းကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပြီး၊ ကလေးလူကြီးမရွေး ကြည့်နိုင်တဲ့ဇာတ်ကား ကောင်းတစ်ကားပါ။ The Incredibles ဇာတ်ကား Review တုန်းက Pixar ရဲ့ အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီကုမ္ပဏီကရိုက်တဲ့ ကာတွန်းတိုင်းက ဇာတ်လမ်းကောင်းပြီး အနုပညာရသမြောက် တယ်လို့ အားလုံးသိထားကြပါတယ်။ ဒီကားကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ အနုပညာရသမြောက်အောင် ရိုက်ကူးထားနိုင်သလို၊ တကယ့် ဝမ်းနည်းကြည်နူး စရာ ကောင်းပြီး၊ ခံစားချက်ရသစုံပေးနိုင်အောင် ရိုက်ကူးထား နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။